အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် (၄) ရက်တာ Ankara သို့မည်သို့ရောက်ရှိမည်နည်း။ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် (၄) ရက်တာကာလ Ankara သို့မည်သို့ရောက်ရှိမည်နည်း။
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် (၄) ရက်တာကာလ Ankara သို့မည်သို့ရောက်ရှိမည်နည်း။
22 / 05 / 2020 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Metro, တူရကီ
အဆိုပါ coronavirus (Covid-19) ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်အညီ, ညမထွက်ရအမိန့်ကို ၂၀၂၀-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ ANKARA GOVERNOR'S UMUMI HIFZISSIHAHA BOARD ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ EGO အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ၂၀၂၀-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ၊ ၂၀၂၀ မေလ ၂၃ ရက်စနေနေ့၊ စနေ၊ ၂၀၂၀၊ မေလ ၂၄-၂၅ မှ ၂၆ ရက်အထိ Ramadan ပွဲပထမ၊ ဒုတိယနှင့်တတိယရက်များတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားများနှင့်ညနေ ၇ နာရီမှညမထွက်ရအမိန့်အနေဖြင့် ၁၆.၃၀ မှ ၂၀း၀၀ အတွင်းအကြားသတ်မှတ်ထားသောညမထွက်ရအမိန့်ကိုဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
ထို့အပြင်လက်တွေ့ကျကျလိုင်း ၄၄၀ ကို ဆက်လက်၍ ဆက်လက်၍ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သော EGO ဘတ်စ်ကားများ၏ထွက်ခွာသွားချိန်နှင့်လမ်းကြောင်းများပြောင်းလဲခြင်းကို KARAR ၏နယ်ပယ်အတွင်းတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးသတင်းများကို EGO CEP မိုဘိုင်း application နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကော်ပိုရေးရှင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ရရှိနိုင်သည်။www.ego.gov.t ဖြစ်ပါသည်) "CITY / Web Information System ရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး" ကဏ္inတွင်။
သို့သော် ၂၀၂၀ ခုနှစ်မေလ ၂၄-၂၆ မှ ၂၆ အတွင်း“ ရာမဒန်ပွဲတော်” ကြောင့်ဘာသာရေးနှင့်ရုံးပိတ်ရက်များတွင် ၆ နာရီမှ ၂၄ နာရီထိအကာကာမြို့ပြမြူနီစီပယ်ကောင်စီမှရွေးချယ်သော "ပထမအကြိမ်ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး" ရွေးကောက်ပွဲအထိညမထွက်ရအမိန့်ကိုကျင့်သုံးမည်။ EGO အထွေထွေညွှန်ကြားမှုမှဘတ်စ်ကားများ၊ ရထားလမ်းစနစ်များနှင့်ကေဘယ်လ်များပါ ၀ င်သောအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ... ” ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီအထက်ဖော်ပြပါနေ့မှထွက်ခွာခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ရသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားများသည်ရမadanွာန်လ ၀၇း၀၀း၀၀း၀၀း၀၀ မှ ၀၀း၀၀ နာရီထိကာလအတွင်းဆောင်ရွက်မည့် EGO ဘတ်စ်ကားများမှအကျိုးရရှိနိုင်သည်။
ညမထွက်ရအမိန့်ကိုသတ်မှတ်သည့်နေ့ရက်များအကြား ANKARAY နှင့် Metro ကိုပိတ်လိမ့်မည်။
M22, M2020, M1 နှင့် M2 လိုင်းများအတွက်နောက်ဆုံးရထားထွက်ခွာချိန်များကို ၂၀၂၀၊ မေလ ၂၂ ရက်သောကြာနေ့တွင်ဖော်ပြထားသည်။
နောက်ဆုံး ANKARAY သို့ ၂၂.၂၀ တွင် Dikimevi နှင့်AŞTİမှထွက်ခွာရန်စီစဉ်ထားသည်။ မက်ထရိုသည်နောက်ဆုံးခရီးသည်များကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ဘတ်စ်ကားများသည်သူတို့၏နောက်ဆုံးကွင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပြီးစီးမည်ဖြစ်သည်။
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် (၄) ရက်အကြာအစ္စတန်ဘူလ်သို့မည်သို့ရောက်ရှိမည်နည်း။ Metro Metrobus နှင့် Steamboats ...
သုသာန် Interchange 10-Day ကိုတစ်ခုတည်းချွတ်ဖြစ်လိမ့်မည်
Metro Istanbul ၏ညခရီးစဉ်များစတင်လိုက်ပါပြီ။ လုံခြုံရေးကိုမည်သို့ပေးမည်နည်း .. ည ...
Izmir ရှိ Weekend အိမ်ပြန်ချိန်သတ်မှတ်ချက်တွင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
ADARAY 10-Day ကိုအခမဲ့
10-Day ကိုမှ Ray ရဲ့ချဉ်းကပ်: အမီးရထားသတိပေးခြင်းအနေဖြင့်ပက်ဖြန်း
Metrobus, Metro နှင့် Steamboats တို့သည်အစ္စတန်ဘူလ်တွင် ၄ ရက်ကြာအမှုဆောင်မည်ဖြစ်သည်
ပက်ဖြန်းခြင်းလမ်းကြောင်းများအတွက် TCDD သတိပေး! 10 ရက်များအတွက်ချဉ်းကပ်မနေပါနဲ့
တူရကီမှပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်! လေဆိပ်များကို Covid-19 လက်မှတ်ရလိမ့်မည်
အစ္စတန်ဘူလ် Marmaray သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် 180 ရက်ပေါင်းလမ်းဆုံသစ်အမှတ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်
Bursa အတွက်ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ 50 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေ့တစျဆငျ့
အစ္စတန်ဘူလ်ပို့ဆောင်ရေးကိုမည်သို့ Will နယူးလေဆိပ်
Izmir အတွက် 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့စျေးတစ်လျှောက်လုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေ့